जियोनिका दुई स्मार्टफोन पी सेभेन म्याक्स र एस सिक्स प्रो बजारमा - Technology Khabar
» जियोनिका दुई स्मार्टफोन पी सेभेन म्याक्स र एस सिक्स प्रो बजारमा
Technology Khabar १७ आश्विन २०७३, सोमबार
काठमाडौं, १७ असोज । दसैंको अवसर पारेर जियोनिले नेपाली बजारमा २ नयाँ स्मार्टफोनहरु ल्याएको छ । नेपाली बजारमा केहि हप्ता अघि मात्र आएको एस सिक्स एस लगत्तै जियोनिले थप दुई फोनहरु एस ६ प्रो (S6 Pro) र पी ७ म्याक्स (P7 Max) बजारमा ल्याएको हो ।
पी ७ म्याक्समा अत्यन्त आकर्षक र चम्किलो डिजाइन रहेको छ । अरु फोनभन्दा भिन्दै डिजाइन ल्याउनु जियोनिको विशेषता नै हो । यसमा ५.५ इन्चको एचडि स्क्रिन रहेको छ । फोनमा १३ मेगापिक्सेलको रियर क्यामेरा र स्क्रिन फ्ल्याश सहितको ५ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ । रियर क्यामेरामा फास्ट शटर स्पिड र फास्ट फोकस विशेषता छ ।
पी ७ म्याक्समा २.२ गिगाहर्जको अक्टाकोर मिडियाटेक पी १० प्रोसेसर छ र ३१०० एम ए एचको ब्याट्री रहेको छ । यसमा ३ जी बि र्याडम र ३२ जी बि इन्टरनल स्टोरेज रहेको छ । अन्य जियोनि स्मार्टफोनझैं यसमा पनि डिटिएस साउन्ट प्रविधि छ । एन्ड्रोइड ६.० मा आधारित जियोनिको अमिगो ३.२ यु आई पी सेभेन म्याक्समा छ । पी ७ म्याक्सकाे रु. २१,९९९/- मूल्य तोकिएको कम्पनीले जानकारी दियो ।
एस ६ प्रो भने एस सिक्स एसको परिष्कृत मोडेल हो । ४ जीबी र्याम र ३२ जीबी स्टोरेज रहेको यो फोनमा ६४ बिटको अक्टा कोर १.८ गिगाहर्ज हेलियो पी १० प्रोसेसर रहेको छ । फोनमा पूर्ण मेटालिक बडि रहेको भने गोरिल्ला ग्लास ३ ले सुरक्षित ५.५ इन्चको १०८०पी फूल एचडि २.५डी वाटर ड्रप डिस्प्ले छ । एस सिक्स प्रोमा १३ मेगापिक्सेलको रियर क्यामेरा र स्क्रिन फ्ल्यास सहितको फ्रन्ट क्यामेरा छ ।
एस सिक्स प्रोमा फ्रन्ट फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि छ जुन फोटो खिच्नका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो डुअल सिम सेटमा ३,१३० एमएएचको ब्याट्री र युएसबि टाइप सी चार्जिंग छ । फोनमा एन्ड्रोइड ६.०.१ मा आधारित जियोनिको आफ्नै युआई अमिगो ३.२ भर्सन छ । रु. ३४,९९९/- मा यो फोन सिल्भर, गोल्ड, र रोज गोल्ड रंगमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७३, सोमबार
नेपाल टेलिकमको भ्वाइस तथा डाटा सेवामा दिउँसो किन भयो समस्या ? यस्तो छ कारण
टाटाले भारतमा एप्पल आईफोनका कम्पोनेन्ट उत्पादन गर्ने, तमिलनाडुमा प्लान्ट स्थापना गर्दै